#XFS oo ka badbaaday in ay magdhow siiso ajnabi lagu xiray Muqdisho » Axadle | Get Latest News From Horn of Africa
#XFS oo ka badbaaday in ay magdhow siiso ajnabi lagu xiray Muqdisho
MUQDISHO, Soomaaliya – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxay ka badbaaday in ay magdhow siiso nin u dhashay waddanka Ingiriiska kaasi oo 9-kii bishan August lagu xukumay magaaladda Muqdisho.
Andrew Brown Irlam, oo markii bishii Janaayo 2019-ka laga qabtay madaarka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cadde ku sheegay magaciisa Anthony Thomas Cox, ayaa waxaa lagu ganaaxay todoba kun oo dollar.
Maxkamadda Gobolka Banaadir gaar ahaan qeybta ciqaabta oo xukunkan riday ayaa sidoo kale waxay daboolka ka qaadey in shaqsigan lagu xukumay xarig mudadii uu xabsiga ku jiray oo ahaa lix bilood.
Xukunkaasi ayaa loo coksaday qodobka 34aad ee Xeerka nabad-gelyadda guud markii la isku khilaafay in lagu saleeyo Xeerka Ciqaabta Guud, kaasoo ku waajibin lahaa todoba kun iyo shan boqol oo shilin Soomaali ah.
Ciqaabta ruuxan ku xirnaa xabsiga dhexe ee Muqdisho, halkaasi oo uu isku day dil kaga badbaaday, oo tirsiga gal-dacwadeedkiisu yahay 253/2019 ayaa illaa iyo haatan waxaa nan jirin cid racfaan ka qaadatay.
“Maxkamadda Sharciga waa fulisaa ee ma unukto,” ayuu Muuse Macalin Maxamed, gudoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir, u sheegay idaacadda Kulmiye, isagaoo xaqiijiyey in ay dood ka dhalatay xeerka.
Isaga oo ka fal-celinaya hadalheyn ka dhalatay lacagta dollar-ka iyo xukunka oo lagu sifeeyay “mid jilicsan,” Muuse ayaa ku booriyey mudaneyaasha baarlamaanka federaalka in ay wax ka bedel ku sameeyan xeerka ciqaabta.
Xukumadda iyo Maamuladda oo is-afgarad ka gaarey hanaanka…
Somaliland oo baabi’isay heshiis ay la gashay…
Illo wareedyo aad ula socday kiiskan ayaa u dusiyey Saxafadda in xukunsanaha, oo laga soo xiray meel aan ahayn goobta hubinta ee garoonka, lagu qabtay Khasnado faaruq ah iyo Jaakad nooca xabadda aan karin ah.
Ma jirin cid ka socotay garoonka diyaaradaha oo dacwad ka keentay Irlam, sidda uu fahansan yahay AX. Si lamid ah, hadii dambiga lagu wayn lahaa, dowladda Soomaaliya waxay waajibi lahayd bixinta magdhow.
Dacwad oogeyaasha oo sheegay in ay ku qanceen xukunka xeer-beegtadda ayaa ku eedeeyay Andrew khal-khalgelinta iyo sumcad dilida amniga garoonka.
“Hadii khasnadaha ay dadka kusoo buraarugi lahaayeen argagax ma dhalin lahaayeen? Maxkamadda waxaa u soo baxday ‘Haa’ intaasi ayaana loo coksaday xukunka, dowladdana uga badbaaday magdhowga,” ayuu tibaaxay.
Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa horey xukuno isugu jira xarig iyo tarxiil waxay ugu riday shaqsiyaad ajaaniib ah kuwaasi oo u kala dhashay wadamadda Uganda, Kenya iyo Faransiiska.
Xubnaha dalalka dhaca Afrika ayaa lagu eedeeyay in ay magaaladda gudaheeda lasoo galeen Khamri, halka ruuxa kale ee kasoo jeeda qaranka ku yaala Yurub uu kiiskiisa lamid ahaa Andrew Brown Irlam.
Mararka ay timaado in ajaaniib lagu xiro Muqdisho, safiiradda wadamada ay ka dhasheen ee fadhigoodu yahay caasimadda waxay isku dayaan in ay culeys saaraan garsoorka Soomaaliya, balse Muuse ayaa u digay.
“Sidda ay dowladdaha kale u doonayaa in loo ilaaliyo sharcigooda, ayaan keenana u ilaalinaynaa, kamana waabaneyno inaan fulino shuruucda dalkeena,” ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay gudoomiye Muuse.
Sep 15, 2019 15,210 0
Diyaarado Drones ah ayaa weerar duqeyn ah ku qaadey Goobo…
Sep 14, 2019 14,743 0
Tiradda booliska Kenya ee AlShabaab ay dishay 2018-kii oo…
Sep 14, 2019 18,800 0
Ciidanka AMISOM iyo Al shabaab oo ku dagaalamaya duleedka…
Sep 14, 2019 17,462 0
Prev Next 1 of 3,846
Dhaq dhaqaaqa Al-shabaab oo sheegtay dilal ka dhacay…
Sep 14, 2019 1,435
Mas’uuliyiin ka tirsan Hirshabelle oo…
Sep 14, 2019 7,445
Kenya Now Seeks Talks, After Delaying…
Sep 13, 2019 47,119
Two million of us weak to starvation as…
Sep 13, 2019 14,711
Prev Next 1 of 3,845